Fomba tsara indrindra mahafotsy Nify | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Posts tagged "fomba tsara indrindra mahafotsy nify"
mahafotsy nify , Teeth Whitening fitaovana , Nify Whitening entana
Getting tsara tarehy mamirapiratra nify no nofy ny efa ho olona rehetra, ary angamba ny anareo koa. Raha ny nify mijanona ho mavo na kilema, na dia miborosy amin'ny tsara tsy tapaka toothpaste, dia mety mila mampiasa akory va ny ny mifanohitra nify Whitening fitaovana tsy tapaka. Misy bunch ny fomba tsara indrindra mahafotsy nify tany an-tsena, ary koa amin'ny Internet ianao dia afaka misafidy ho. Na izany aza, rehetra ireo no tsy miasa mitovy amin'ny Whitening ny nify. Fomba tsara indrindra mahafotsy nify miasa tsara sy haingana kokoa, raha ambany kalitao vokatra mba mahafotsy nify tsy. Mampiasa levitra nify Whitening fitaovana toy ny vava trays, Whitening gels, Whitening ravin safidy tsara ho an'ny fanaovana ny nify fotsy, fa toy izany matetika miala fitaovana vokany. Izany no mahatonga ny olona maro no tsy te-hampiasa izany fitaovana. Raha toa ianao ka iray amin'izy ireo dia afaka misafidy ho an-trano toy izany nify Whitening fomba tsara indrindra mahafotsy nify ny tandrify sy ny fifadian-kanina vokany.
Misy antony maro, izay mety hahatonga ny nify discolored. fifohana sigara sigara, fitsakoana sigara, misotro divay mena, soda, dite sy kafe dia afaka manao ny nify discolored. Noho izany, mba hahatonga ny nify fotsy, tsy maintsy hiala fahazarana toy izany aloha. Ny dingana voajanahary ny fahanterana ary ny sasany toy ny vy fanafody fanampin-tsakafo, vitaminina fanampin-tsakafo, ary ny sasany koa dia afaka hisy fiantraikany antibiotika ny volon'ny nify. Ity misy mora, haingana sy fomba tsara indrindra mba mahafotsy nify fanafody.
Fomba tsara indrindra mahafotsy nify
Afaka mampiasa ny an-trano nify Whitening vokatra izay fomba tsara indrindra mahafotsy nify mba hahatonga ny nify fotsy. Toy izany ny vokatra dia lafo sady mora ampiasaina. Ary, dia afaka mampiasa izany vokatra tsy mandeha akory mpitsabo nify matihanina. A an-trano nify Whitening fitaovana ankapobeny tonga amin'ny Whitening ravin sy ny vava gel. Mila hametraka ity fomba tsara indrindra mba mahafotsy nify entana araka ny toromarika eo amin'ny nify ho vokany tsara. Raha tianao ny tena nandrasana vokany, tsy maintsy mitandrina ny vokatra napetraka amin'ny nify alohan'ny hatoriana amin'ny alina, fa raha kely indrindra 10 minitra. Koa mila hampiasa azy ireny tsy tapaka.
Iray hafa tsara fa lafo fomba tsara indrindra mahafotsy nify safidy dia ny mitsidika ny mpitsabo nify ny efi. Izany no fomba haingana indrindra ny tsara indrindra nify Whitening. Ny mpitsabo nify ankapobeny mahazo fanampiana ny nify bleaching maika, tamin'ny laser fahazavana sy ny nify gels nampidina ny tao am-bavan'ny lovia (tokony hanaovana alohan'ny hatoriana) mba hahatonga ny marary nify fotsy. A matihanina fitsaboana nify Whitening mety lany ianao any ho any eo 250 USD ary 900 USD. Na dia tsy tena lafo, nefa manome ny tsara indrindra sy ny vokany maharitra.
Afaka mampiasa an-trano nify Whitening zavatra izay ny fomba tsara indrindra mahafotsy nify mba hahatonga ny nify misy kilema-maimaim-poana. Afaka mampiasa fanaova soda, ary koa ny hidrôzenina peroxyde mba hahatonga ny nify fotsy. Samy tsara indrindra bleaching mpiasa izay hanampy ny eau de Javel ny nify. Ny fanaova soda dia Marokoroko sy eo amin'ny natiora, ary dia toy izany no manampy mba hanesorana stains sy tartars. Afaka mampiasa azy ireo manokana na miaraka amin'ny alalan'ny fanaovana ny tsara dia tsara Mametaka azy. Azonao atao ihany koa hofafazany ny fiantraikany ny fanaova soda teo amin'ny toothpaste raha fanilihana.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 5, 2016 amin'ny 12:21 AM
Sokajy: Mahafotsy Teeth Tips Tags: fomba tsara indrindra mahafotsy nify, mpitsabo nify ny efi, nify bleaching maika, nify Whitening, Nify Whitening entana, mahafotsy nify
Teeth Whitening - Fisorohana no Tsara Kokoa Noho fanafodin'ny
Ny nifiny dia tena manan-danja. Ampiasaintsika rehetra ny fotoana amin'ny nihinana sy niresaka, sns. sary an-tsaina ny fiainana tsy misy olona izy. Milaza izy ireo fa tsy manana ny miborosy nify – fotsiny ny olona tianao foana. Koa hihazonana azy ireo dia tsy maintsy. Isika rehetra dia te izay mamirapiratra fotsy nify izay hitantsika ao amin'ny dokam-barotra, gazety sns. mba hahatratrarana azy ireo, ampiasaintsika fomba tsara indrindra mahafotsy nify. Whitening ravin, toothpaste, Whitening Sasao na fitsaboana amin'ny mpitsabo nify dia mety ho iray amin'ireo fomba tsara indrindra mahafotsy nify.
Fisorohana tsara kokoa noho ny fitsaboana. Fikarakarana ny nify dia tokony hanomboka raha mbola tanora isika. Rehefa kely izahay nangataka izahay tsy mba hihinana mamy be loatra, sôkôla na zava-pisotro Misy asidra mba hisorohana ny nify mitodika mavo. ny fifohana sigara, kafeinina, antitra sy ny zava-mahadomelina dia afaka voalotoko ny nifiny ihany koa. Izany no antony tokony mahalala ny fomba tsara indrindra mahafotsy nify, ho antsika ny mahafantatra sy tsy ilaina hisorohana ireo zavatra izay miteraka nify stains.
Soso-kevitra Nahasakana Nify Stains
Miborosy ary floss tapaka. Izany no tena fototra tsotra sy fomba fisorohana ny nify tasy.
Whitening toothpaste ny manodidina. Azo nividy teo an entana sy ny fivarotam-panafody ao amin'ny teti-bola namana vidiny. Tena izy ireo namoaka fa afaka mahafotsy nify, fa raha ny marina dia afaka amin'ny ampahany fotsiny mahafotsy ny nify. Ary ho azo antoka fa izy ireo dia marika amin'ny tombo-kase nekena sy clinically tokoa mahafotsy nify.
Andeha mijery inona no misotro. Drinks izay manan-karena amin'ny kafeinina toy ny kafe, soda, dite, sns. no meloka. Alaviro ireo, na miezaka ny hitondra azy ireo amin'ny ampahany kely.
Ny fifohana sigara dia tsy manimba fotsiny ny havokavoka sy ny hoditra; izy ireo ihany koa ny hanimba sy hanitsaka ny nify manome antsika antony bebe kokoa mba hijanona hiala aminy.
Ny sasany amin'ireo pilina koa isika haka hahatonga mba hampietreny ny nify. Tandremo fa Tetraclyne Antibiotics izay mety mirehitra ny nify.
Whitening ravin sy gels dia mety koa ho ny fomba tsara indrindra mahafotsy nify, misy be dia be amin'izy ireo ny latabatra, ary tsy izay lafo.
Raiso an-trano Whitening trays avy amin'ny mpitsabo nify mety ho lafo, fa izy ireto no fomba amam-panao mendrika ho anao, satria mety ho ny fomba tsara indrindra mahafotsy nify ary hanampy anao mahafotsy ireo nify satria manampy azo antoka fa ny eau de Javel mijanona ao amin'ny fifandraisana miaraka amin'ny nify ho an'ny indrindra Whitening.
Raha ny zavatra hafa rehetra tsy. Izany no farany safidy mba hifidy ny fomba tsara indrindra mahafotsy nify dia ny mandinika firaiketam-po na bakoly veneers, dia lafo be, fa izy ireo no hamaha ny fahasorenana amin'ny Whitening nify.
Ireo fotsiny ny sasany fomba tsara indrindra mahafotsy nify izay mety hanampy mahatonga ny nify mijery mavitrika sy mamirapiratra. Fa manakana azy ireo dia tsara noho ny mitsabo foana. Koa manalavitra ireo izay mety voalotoko ny nify mba mitsiky ny lalana rehetra. Raha afa-po amin'ireo toro-hevitra, azonao atao koa mikaroka ny aterineto ho an'ny havana bebe kokoa momba vaovao fomba tsara indrindra mahafotsy nify.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 5, 2016 amin'ny 12:15 AM
Sokajy: Mahafotsy Teeth Tips Tags: fomba tsara indrindra mahafotsy nify, an-trano Whitening, Soso-kevitra Nahasakana Nify Stains, fotsy mamirapiratra nify, mahafotsy nify